हालै मात्र आईफोन ट्वेल्भ र ट्वेल्भ प्रोमा केही समस्या देखिन थालेपछि एप्पलले यी फोनहरू निशुल्कमा रुपमा मर्मत गरिदिने घोषणा गरेको छ ।
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ९:३१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। हालै मात्र आईफोन ट्वेल्भ र ट्वेल्भ प्रोमा केही समस्या देखिन थालेपछि एप्पलले यी फोनहरू निशुल्कमा रुपमा मर्मत गरिदिने घोषणा गरेको छ । आईफोन १२ र १२ प्रोको साउन्ड लगायतका अन्य फिचरहरूमा समस्या देखिए पछि एप्पलले एक सूचना जारी गर्दै ती फोनहरू निशुल्क मर्मत गरिदिने बताएको हो ।
कम्पनीका अनुसार सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ को अप्रिल महिनाको बीचमा बनेका आईफोन ट्वेल्भ र ट्वेल्भ प्रोमा साउन्डको समस्या देखिएको छ ।
यसअनुसार फोन कल अथवा अन्य कुनै भिडिओ कल गर्दा आफ्नो आवाज नजाने समस्या भएका कुनै पनि आईफोन ट्वेल्भ र ट्वेल्भ प्रोका ग्राहकले निशुल्क रुपमा आफ्नो फोन मर्मत गर्न पाउनेछन् ।
सविना गौतम - आइतवार, मंसिर ५, २०७८ ५:४५
उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल सेवा प्रदायक (मोबाइल नम्बर)लाई अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्क (सिम)मा बदल्न सकिने गरी सरकारले ‘मोबाइल नम्बर पोर्ट्याबिलिटी’ कानुनी प्रस्ताव गरेको छ
नेपाल अन्लाईन पत्रिका - बिहिबार, कार्तिक २५, २०७८ १:१८
नेपाल अनलाइन पत्रिका - काठमाडौं। बाह्य संसारमा कुनैपनि चिजलाई उठाउन वा कतै लैजानका लागि हातको प्रयोग गरिन्छ । तर कम्प्युटरको संसारमा भने यही कामका...
आईफोनको पछाडि, यो कालो थोप्लाको काम के हो?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका - आइतवार, कार्तिक २१, २०७८ ११:३०
क्यामेरा एर्रे भित्रै रहेको हुँदा यसको काम के होला भन्ने अनुमान लगाउन तपाईँका लागि एउटा आधार चाहिँ हुनसक्छ । पक्कै पनि यो क्यामेरा नै हो । वास्तवमा यो स्क्यानर हो । लाइट डिटेक्सन र रिङ्गको लागि लिडार रहेको हुन्छ ।
नेपाली बजारमा भित्रियो साओमी प्याड फाइभ, कति होला मूल्य ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका - आइतवार, कार्तिक २१, २०७८ ६:५७
साथै यसमा ७ एनएम क्वालकम स्न्याप ड्रागन ८६० चिपसेट प्रयोग गरिएको छ । ८७२० एमएएच उच्च क्षमताको ब्याट्री राखिएको साओमी प्याड फाइभ चाँडै साओमीका आधिकारिक स्टोरबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।